QM oo ka digtay barakac hor leh oo dhaca Suuriya - BBC News Somali
QM oo ka digtay barakac hor leh oo dhaca Suuriya
Image caption Xeryaha qaxootiga ee Suuriya
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay qiyaastay in in ka badan hal milyan oo qof ay ku barakici doonaan gudaha waddanka Suuriya dhammaadka sanadkan haddii uu sii xumaado dagaalka halkaasi ka socda.
Xiriiriyaha arrimaha bini'aadamnimada ee Qaramada Midoobay ee halkaasi, Yacquub El-xuluw, ayaa waxa uu ka digay in muwaadiniinta Suuriya ee qaxaysa ay suuragal tahay in ay sii wadaan in ay isku dayaan in ay gaaraan Yurub bilaha soo socda.
Mr El-xuluw, waxa uu sheegay in dagaalka ka soconaya gudaha waddanka Suuriya uu mar horaba sanadkan barakiciyay in ka badan hal milyan oo qof.
Waxa uuna rumeysan yahay in haddii ay collaadu cirka isku sii shareerto ay milyan qof oo kale ay khasab ku noqon doonto in ay guryahooda ka qaxaan dhammaadka sanadka.
Wax uu sheegay haddii aanan la joojin dhiigga ku qubanaya dalkaasi in qulqulka Suuriyaiinta uu sii socon doono, Yurubna ay wajihi doonto xaalad qaxooti oo la mid ah middii ka dhalatay Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Yacqub El-xuluw, ayaa sidoo kale ku baaqay in gacan la siiyo dhowr barnaamij oo gargaar ah oo ay soo wajahday gabaabsi dhanka maaliyadda ah, barnaamijyadaasi oo la isku dayayo in Suuriyiinta lagu sii hayo dalkooda meelkasta oo ay suuragal tahay.